Shiinaha 5XZ-L Shaybaarka Cus-jiidadka Soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha | SYNMEC
5XZ-L Kala soocida Culayska Shaybaadhka
Kala-soocida cuf-isjiidadka 5XZ-L waxaa loo isticmaalaa in lagu kala saaro abuurka iyadoo loo eegayo kala duwanaanshaha cuf-jiidad gaar ah. Waxay ka saartaa granule oo leh cuf-jiidad gaar ah oo culus (sida quruurux, qaybo carrada), iyo granule leh cuf-fudud gaar ah (sida miraha caariyaysan, miraha ay waxyeello u geystaan ​​gooryaanka).
Magaca Kala-soocida iniinnada shaybaadhka
Awood 50 kg/h
Awoodda hawada afuufaysa 0.37 kw
Awood gariir 0.13 kw
Inta jeer ee gariir 0-600 jeer/min
U janjeersiga looxa miiska 0-3°
Cabirka 1000×700×1440 mm
Sariirta shaandheynta waa qaab dhismeed saddex xagal ah. Waxa jira daloolo badan oo aluminium feedh ah oo ku yaal aagga quudinta. Tan waxaa loogu talagalay in lagu dedejiyo shaandhaynta walxaha. Meelaha laga baxo ayaa loogu talagalay wasakhda iftiinka, walxaha isku dhafan, miraha wanaagsan. Waxaa jira taargooyin la hagaajin karo si loo helo saameyn kala soocidda la rabo.
Kala soocida cuf-jiidadka shaybaadhka ee saldhiga kala soocida cufnaanta hadhuudhka. Miiska kala soocida culeysku waa qaab dhismeed saddex xagal ah. Miisaska kala saara cufisjiidad xagal toosan, xagal toosan, inta jeer ee gariirka, mugga hawada afuufaya hoose dhamaantood waa la hagaajin karaa. Tani waxay buuxin kartaa cabbirro kala duwan, cufnaanta kala duwan ee shuruudaha kala soocidda abuurka. Markaa waxaad abuur doontaa qaybinta cufnaanta ee dufcaddan iniinaha.
Dhismaha kala soocida cuf-jiidadka shaybaadhka:
1. Quudinta hopper
2.Electromagnetism feederiyaha gariir
3.Miiska kala soocida cuf-jiidadka
4.Nidaamka wareega wadista
6. taageere hoose
Hore: 5XFJ Mashiinka qiimaynta shinnida/samaynta iniinta ee digirta digirta
Xiga: 5XZC-L Nadiifiyaha Abuurka Shaybaadhka & Darajeeyaha
5XWY jeexan dhererka dhululubada grader sepa...
5XZC-L Nadiifiyaha Abuurka Shaybaadhka & Darajeeyaha
5XFX-L Nadiifiyaha Hawada Abuurka Shaybaadhka